बलात्कार गर्ने पुरुषमाथि खुकुरी प्रहार ! - नेपालबहस
बलात्कार गर्ने पुरुषमाथि खुकुरी प्रहार !
| १२:५४:४१ मा प्रकाशित
२९ असोज, विराटनगर । २८ बर्षीया बर्षा (नाम परिवर्तन) धनकुटा बजारमा छोरासँग बस्दै आएकी थिइन् । श्रीमान रोजगारीका लागि खाडी गएका थिए । घरमा बर्षा पछिल्लो दुई बर्षदेखि एक्लै बस्दै आएकी हुन् ।
गुरुङ थरकी उनी हेर्दा राम्री मात्रै होइन, बोलीचालीमा पनि अरुभन्दा फरक थिइन् । यत्तिकैमा छिमेकी लिलबहादुरको आँखा लाग्यो । उनले दैनिक बर्षालाई लुकेरै हेर्थे । मौका भेट्यो कि उनी जिस्क्याउथे । यो क्रम पछिल्लो दुई महिनादेखि चलेकै थियो ।
तर पनि बर्षाले कसैलाई भनेकी थिइनन् । लिलबहादुरलाई पनि उनले भाउ दिएकी थिइनन् । परदेशी श्रीमानको बाटो हेरेर बसेकी थिइन् । छोराको अनुहार हेरेर उनले जीवन अगाडी बढाएकी थिइन् । तर लिलबहादुरले पीछा गर्न छाडेनन् ।
बेला बेला उनले फोन गरेर समेत बर्षालाई फकाउने प्रयास गर्थे । तर पनि उनको प्रयास सफल भएको थिएन् । अनि उनी रिसकै बेगमा चुरोट र रक्सी खान थालेका थिए । रक्सी खाएर उनी बुधबार मध्यराती बर्षाको कोठातर्फ मोडिए ।
आज जसरी पनि आफ्नो यौनप्यास मेट्ने भन्दै बर्षाको घरमा पुगेका उनले शुरुमा ढोका ढकढक गरे । त्यसपछि थप आग्रह गरे । तर बर्षाले बेवास्ता गरिरहिन् । रक्सीकै तालमा उनले बल लगाएर ढोका फोडे ।
मध्यरातमा छिमेकीले भने यो कुरा सुनेर पनि बेवास्ता गरिरहे । त्यसपछि मातेकै बेलामा लिलले ढोका फोडेर बर्षामाथि जबर्जस्ती गर्न खोजे । रिसले असह्य भएकी बर्षाले नजिकै रहेको खुकुरीले लिलमाथि प्रहार गरिन् ।
बर्षा रिसाएर खुकुरी हानेपछि उनी डराए । अनि त्यत्तिकैमा ढोकाबाट निस्केर आफ्नो घरतिर लागे । तर उनी घर नपुग्दै बाटोकै नहरमा ढले । घाउ लागेको थाहा नपाएपनि उनको शरीरबाट रगत धेरै बगेपछि मृत्यु भएको आशंका गरिएको छ ।
प्रहरीले भने बर्षालाई पक्राउ गरेर थप अनुसन्धान शुरु गरेको छ ।
गर्लफ्रेन्डको विषयमा विवाद हुँदा आफ्नै साथीको हत्या, दुई जना पक्राउ ! ४ दिन पहिले
३० लाख लिएर क्राईमका इन्चार्ज तस्करीलाई सघाउँदै १ हप्ता पहिले
शुक्रबार पैगम्बर हजरतको जन्मदिनमा प्रदेशमा विदा, मुख्यमन्त्री राउतद्वारा शुभकामना व्यक्त १३ घण्टा पहिले
फार्म खोलेर धान खेतमा माछापालन : चार महिनामा तीन लाख आम्दानी १७ घण्टा पहिले
बाँकेमा उपचाररत २३ संक्रमितको अवस्था गम्भीर, ४१ मध्यम २२ सामान्य १६ घण्टा पहिले
रत्नपार्क क्षेत्रमा साँझ चहलपहल १ दिन पहिले
आजदेखि लपु महानगरपालिकाका नगर प्रहरीको पोशाक परिवर्तन १ हप्ता पहिले
लकडाउनबाट मुक्त हुन एक वर्ष लाग्न सक्छ : प्रधानमन्त्री नेतन्याहु ४ हप्ता पहिले
आज भारत र चीनबीच कमाण्डरस्तरको सातौँ वार्ता हुँदै ३ हप्ता पहिले
मन्दिरको परिसरमा ग्राहकको प्रतिक्षा गर्दै व्यापारी १ हप्ता पहिले
भजनीका बाढीपीडित घर फर्किएको ३ तीनमै पुनः विस्थापित ३ महिना पहिले
बीमा शुल्कमा छुट दिन समितिको निर्देशन २ महिना पहिले
सामाजिक सुरक्षाभत्ता दुरुपयोग हुन नदिन साकेलाको अभियान १ महिना पहिले